Shacab fara badan oo buux dhaafiyay afaafka hore ee Garoonka Aadan Cadde | Baydhabo Online
Iyadoo saacadaha soo socda la sugaayo in Magaalada Muqdisho uu soo gaaro Madaxweynihii hore ee Somaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa waxaa afaafka hore ee Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho buux dhaafiyay Boqolaal dadweyne ah.
Dadkaan oo ah kuwa taageersan Shariif Sheekh Axmed, ayaa muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay u doonayaan in Magaalada Muqdisho uu soo gaaro Shariif oo ah nin musharax ah una taagan qabashada hogaanka dalka.
Wariyeyaal ku sugan afaafka hore ee Garoonka Aadan Cadde ayaa soo sheegaya inuu istaag gabi ahaanba isu socodkii gaadiidka yar yar ee Garoonka oo wadada dhan ay xireen Boqolaal dadweyne ah oo Shariif Sheekh Axmed sugaayo
Nabad Suggida ee Koontaroolka ku leh wadada Aada Garoonka Aadan Cadde, ayaa gaadiidka qaar u diiday inay gudbaan, waxaana gaadiidka dadka wata ay sameeyeen xeelad ku aadan inay ka wareegsadeen wadada oo dhanka wadada Buulo Xuubey ay ka soo galeen Garoonka.
Dadka ka qayb qaadanaya soo dhaweynta Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, ayaa waxaa ka mid ah ciidamo fara badan oo ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya, kuwaasi oo iyagoo hubaysan buuxiyay afaafka hore ee Garoonka.
Shariif oo loo diyaariyay guri ku dhaw Garoonka Aadan Cadde agtiisa, ayaa halkaasi waxaa ku sugan qaar ka mid ah dadka ka shaqeynaya Ololahiisa Doorashada.
Baraha Bulshada iyo goobaha dadka ay isugu yimaadaan ayaa si weyn looga hadal haayaa in Maanta Magaalada Muqdisho uu ku soo wajahan yahay Madaxweynihii hore ee dalka.